किन निर्माता चिड्याउँछन् प्रदिप ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipकिन निर्माता चिड्याउँछन् प्रदिप ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – हिरो प्रदिप खड्काको माग बढ्दो छ । तर, माग बढ्दा त्यसलाई सम्हाल्न आवश्यक छ । सम्हाल्न सकिएन भने स्टारडम लामो समय नटिक्न पनि सक्छ ।
अभिनेता प्रदिप खड्कामाथि लगानी गर्न चाहने निर्माता बढ्दा उनको काम गराई भने चित्तवुझ्दो छैन । निर्माता चिड्याउने कारणले प्रदिपमाथि धेरै निर्माता असन्तुष्ट छन् ।
हालै, निर्माता सुवास गिरीले प्रदिपसँग भैरवीमा काम नगर्ने मनस्थिती बनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ । सुवास गिरीले कृ सिनेमाको छायांकन सके लगतै प्रदिपलाई ५ लाख एडभान्स रकम दिएर संझौता गरेका थिए । तर, अब उनी प्रदिपको विकल्प खोज्दैछन् । प्रदिपले फोन नउठाउने, रेस्पोन्स पनि नगर्ने गरेकाले निर्माता चिडिएका हुन् ।
प्रदिपमाथि लगानी गर्न चाहने निर्मातामा सुनिल कुमार थापा पनि पर्छन् । ए मेरो हजुर २ र ३ मा नै उनले प्रदिपलाई सिनेमामा लिन चाहेका थिए । तर, प्रदिपसँग कुरा मिलेन ।
निर्माता दिपकराज गिरीले त छक्का पन्जा २ मा उनलाई काम गराउन चाहेका थिए । तर, प्रदिपले कथा नदिएको भन्दै फिल्म गरेनन् । शत्रु गते सिनेमा पनि यस्तै भयो । प्रदिपले काम गरेनन् ।
प्रदिपले काम नगरेका सिनेमाको सूची लामो छ । उनले, प्रेमगीत सिनेमामा काम गरेपछि निर्देशक सुदर्शन थापासँग काम गरेका छैनन् । सुदर्शनले उनलाई लिएर सिनेमा बनाउन चाहेका थिए । तर, फोन सम्पर्कमै नआउने, नभेट्ने उनको बानीले सुदर्शन पनि हैरान बने । प्रदिपकै नजिकका निर्माता भनिएका सन्तोष सेन पनि प्रेमगीत ३ मा उनको विकल्प खोजिरहेका छन् ।
लिलिबिलीमा काम गरेपछि राम्रा निर्माता मिलन चाम्स प्रदिपले गुमाएका छन् । मिलनले प्रदिपलाई लिएर सिनेमा नबनाउने बताएका छन् ।
निर्माताले लगानी गरेरै हो कोही यूवा वा यूवती सुपरस्टार बन्ने । तर, लगातार ठूला निर्मातालाई पाखा लगाउँदा प्रदिपमाथि संकट आइपरे के होला ?